အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို မကြာမကြာ သောက်လွန်းတဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ? - For her Myanmar
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို မကြာမကြာ သောက်လွန်းတဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်လဲ?
အမလေး… ဖတ်ကြည့်လိုက်မှ ကြောက်စရာကြီး..
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသုံးများလာတဲ့ဆေးကိုပြပါဆိုရင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ… ဈေးကွက်မှာ အတွင်ကျယ်ဆုံး အနာသက်သာတဲ့ ဆေးဟာ စတီးရွိုက်မပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (NSAID) တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အက်ဒ်မင်တို့ အများစုဟာ ခေါင်းကိုက်လည်း အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်လိုက်လေ၊ ဗိုက်အောင့်လည်း အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်လိုက်လေ ဆိုပြီး ပြဿနာတော်တော်များများကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနေကြသလို ဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်လည်း သောက်လိုက်ရင် သက်သာတာကိုးနော်.. ဒါပေမဲ့လို့ တန်ဆေး၊ လွန်ဘေးဆိုသလို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အသုံးများလာတာနဲ့အမျှ ဆေးရဲ့ အန္တရာယ်တွေလည်း ကြီးစိုးလာပါတော့တယ်။ ဘယ်လို အန္တရာယ်တွေလဲဆိုတော့…
နှလုံးထိခိုက်နိုင်မှုဟာ ကိုယ်သောက်တဲ့ ဆေးရဲ့ပမာဏပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ များများသောက်လေ နှလုံးထိခိုက်နိုင်မှု ပိုများလေလေပါပဲ။
(၂) အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်း
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဟာ သွေးခဲချိန်ကို ကြန့်ကြာစေတဲ့အတွက် ဆရာဝန်အများစုက လေဖြတ်ရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေမှာ သုံးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေက အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာ သွေးယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာအိမ်မှာအနာလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
Related Article >>> ဒီဆေးတွေကို တွဲသောက်မိရင်….
(၃) ကျောက်ကပ်ထိခိုက်မှုနှုန်း မြင့်မားစေခြင်း
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်သျှူးတွေကြားမှာ ရေတွေကို ပုံစေတဲ့အတွက် ဖောရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူတွေဟာ ဒီဆေးတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်နော်..
(၄) ပြင်းထန်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ခြင်း
တချို့သူတွေက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်ပါဘူး။ အသက်ရှူထုတ်ချိန်မှာ တရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊ အနီကွက်များပေါ်လာခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းတွေအပြင် အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်း နှေးကွေးစေပါတယ်။
(၅) ကလေးငယ်များနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် အန္တရာယ်
ရေကျောက်နဲ့ တုပ်ကွေးမိနေတဲ့ကလေးကို အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတိုက်မိတဲ့အခါ အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အသည်းရောဂါကြောင့် သေဆုံးနိုင်သလို တစ်သက်လုံး ဦးနှောက်ပျက်စီးသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကလေးမှာ ရေကျောက်ပေါက်နေတယ်၊ တုပ်ကွေး မိနေတယ်လို့များ သံသယရှိရင် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး မတိုက်မိပါစေနဲ့ ယောင်းရေ…
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အခြားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့…
ဗိုက်အောင့်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်နော် ယောင်းတို့…
အန္တရာယ်ကို ဉာဏ်ကူပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေနော်…
Reference : Draxe.com
အမလေး… ဖတျကွညျ့လိုကျမှ ကွောကျစရာကွီး..
ဒီနခေ့တျေမှာ အသုံးမြားလာတဲ့ဆေးကိုပွပါဆိုရငျ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှကေို လကျညှိုးထိုးပွရမှာပါ ယောငျးတို့ရေ… ဈေးကှကျမှာ အတှငျကယျြဆုံး အနာသကျသာတဲ့ ဆေးဟာ စတီးရှိုကျမပါတဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး (NSAID) တှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
အကျဒျမငျတို့ အမြားစုဟာ ခေါငျးကိုကျလညျး အကိုကျအခဲပြောကျဆေး သောကျလိုကျလေ၊ ဗိုကျအောငျ့လညျး အကိုကျအခဲပြောကျဆေး သောကျလိုကျလေ ဆိုပွီး ပွဿနာတျောတျောမြားမြားကို အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှနေဲ့ ဖွရှေငျးနကွေသလို ဖွဈလာပါတယျ။ တကယျလညျး သောကျလိုကျရငျ သကျသာတာကိုးနျော.. ဒါပမေဲ့လို့ တနျဆေး၊ လှနျဘေးဆိုသလို အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ အသုံးမြားလာတာနဲ့အမြှ ဆေးရဲ့ အန်တရာယျတှလေညျး ကွီးစိုးလာပါတော့တယျ။ ဘယျလို အန်တရာယျတှလေဲဆိုတော့…
နှလုံးထိခိုကျနိုငျမှုဟာ ကိုယျသောကျတဲ့ ဆေးရဲ့ပမာဏပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ မြားမြားသောကျလေ နှလုံးထိခိုကျနိုငျမှု ပိုမြားလလေပေါပဲ။
(၂) အစာအိမျနှငျ့အူလမျးကွောငျး ပကျြစီးခွငျး
အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှဟော သှေးခဲခြိနျကို ကွနျ့ကွာစတေဲ့အတှကျ ဆရာဝနျအမြားစုက လဖွေတျရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတှမှော သုံးကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှကေ အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးမှာ သှေးယိုစိမျ့မှုကို ဖွဈပှားစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အစာအိမျမှာအနာလညျး ဖွဈတတျပါသေးတယျ။
Related Article >>> ဒီဆေးတှကေို တှဲသောကျမိရငျ….
(၃) ကြောကျကပျထိခိုကျမှုနှုနျး မွငျ့မားစခွေငျး
အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှဟော ခန်ဓာကိုယျရဲ့တဈသြှူးတှကွေားမှာ ရတှေကေို ပုံစတေဲ့အတှကျ ဖောရောငျခွငျးကို ဖွဈစပေါတယျ။ နာတာရှညျ ကြောကျကပျရောဂါ ရှိသူတှဟော ဒီဆေးတှကေို ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျနျော..
(၄) ပွငျးထနျတဲ့ ဓာတျမတညျ့မှုတှေ ဖွဈပှားစနေိုငျခွငျး
တခြို့သူတှကေ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှနေဲ့ ဓာတျမတညျ့ပါဘူး။ အသကျရှူထုတျခြိနျမှာ တရှီရှီမွညျခွငျး၊ အနီကှကျမြားပျေါလာခွငျး၊ လညျခြောငျးနာခွငျးတှအေပွငျ အသကျရှူနှုနျးကိုလညျး နှေးကှေးစပေါတယျ။
(၅) ကလေးငယျမြားနှငျ့ ဆယျကြျောသကျမြားအတှကျ အန်တရာယျ
ရကြေောကျနဲ့ တုပျကှေးမိနတေဲ့ကလေးကို အကိုကျအခဲ ပြောကျဆေးတိုကျမိတဲ့အခါ အသညျးနဲ့ ကြောကျကပျကို ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ တဈခါတလေ အသညျးရောဂါကွောငျ့ သဆေုံးနိုငျသလို တဈသကျလုံး ဦးနှောကျပကျြစီးသှားတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကလေးမှာ ရကြေောကျပေါကျနတေယျ၊ တုပျကှေး မိနတေယျလို့မြား သံသယရှိရငျ အကိုကျအခဲ ပြောကျဆေး မတိုကျမိပါစနေဲ့ ယောငျးရေ…
ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ အခွားသော ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေတော့…
ဗိုကျအောငျ့ခွငျး စတာတှေ ဖွဈပါတယျနျော ယောငျးတို့…
အန်တရာယျကို ဉာဏျကူပွီး ရှောငျရှားနိုငျကွပါစနေျော…
Tags: danger, Dosage, Health, much, normal, Over, Usual
အိပ်ရေးပျက်တာ များရင် ဆီးချို တက်တတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
For Her Myanmar February 22, 2019